रक्तदान गरेर जीवन बचाउँ !!! अहिलेको आवश्यकता रगत ।।। – Ram Kumar Pariyar
Next भाईबरले नेपालीलाई दियो सित्तैमा फोन गर्ने सुविधा
Previous फेरि अर्को शक्तिशाली भूकम्प, १२ बजेर ५४ मिनेटमा, झण्डै एक मिनेट, ६२ पटकसम्म भूकम्पको धक्का
अनुभुती · २०७२ बैशाख १३ 0
रक्तदान गरेर जीवन बचाउँ !!! अहिलेको आवश्यकता रगत ।।।
रामकुमार परियार |	२०७२ बैशाख १३
“रगतदान नै जीवन दान हो”
हालैको विध्वंसात्मक घटनाले देश स्तब्ध बनेको बेला जिवनको आशामा अस्पतालमा छटपटाईरहेका घाईतेको उद्दार गरि जीवन बचाउनु नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता र कर्तव्य हो । त्यसको निम्ती यथाशक्य सहयोग जुटाउन लागिपर्न सम्पुर्ण नेपाली,गैह्र नेपाली समुदाय संग आग्रह गर्दछु ।
यतिबेला अस्पतालका शैयामा रहेका र खुल्ला चौरमा उपचाररत घाईतेको जीवन बचाउनको निम्ति पहिलो र अतिआवश्यक भनेको “रगत” हो । देशका अस्पतालहरुमा रगतको चरम अभाव देखिएको छ । यो विकराल परिस्थितिमा उनिहरुको जीवन बचाउनु नै हाम्रो पहिलो कर्तव्य हो । कसैले पनि उपचार र रगत नपाएर मर्नु नपरोस । रगत उपलब्ध गराउन सक्ने बाटो हामी शिवाय अरु छैन ।
तपाईंको रगत बाट अर्को एउटा जीवन अकालमै मर्नबाट जोगिनेछ । त्यसैले कृपया अहिले नै रगतदान गर्न सम्बन्धित अस्पताल वा रेडक्रस मा जानुहोस । मेरो विनम्र आग्रह छ,तपाईंको रगतबाट कसैले नयाँ जीवन पाउनेछ,उनिहरुको जीवन बचाउनु हाम्रो कर्तव्य हो । रगत दानबाट तपाईंलाई कुनै हानी पुग्दैन । बरु अझ स्वस्थ नयाँ रगत बनेर तपाईको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्नेछ ।
यतिबेला काठमाडौमा रगतको चरम अभाव देखिएको छ । यो किन्न र बनाउन पाईने चिज होईन , न त पैसा खर्चेर सजिलै पाईन्छ । मानवताको हिसाबले निशुल्क उपलब्ध हुने चिज हो । भोलि जोकोहीलाई आवश्यकता पर्न सक्छ । तपाईंको एक प्रिन्ट रगतबाट कोहि अभिभावक गुम्नबाट बच्नेछन । टुहुरो हुनबाट जोगिनेछन । सिउँदो पुछिनबाट रोकिनेछन । त्यसैले प्लिज प्लिज प्लिज अहिले नै रक्तदान गरौँ ।